Wararka Maanta: Axad, Oct 21, 2012-Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo sheegay in ay Muqdisho iyo Gobollada dalka isku furi doonaan
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo sheegay in ay Muqdisho iyo Gobollada dalka isku furi doonaan Axad, October, 21, 2012 (HOL)-Abaanbuulaha Ciidamada Dowladda Soomaaliya Jen. Cabdikariin Yuusuf Dhego-badan ayaa shaaciyay howlgallo baaxad leh oo ay qorsheynayaan in ay dhawaan sameeyaan, kuwaasi oo ay ku doonayaan in ay Magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka isku xiraan.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Jen. Dhego-badan waxaa uu sheegay in howlgallada ay sameynayaan ay yihiin kuwo amniga lagu hagaajinayo, sidoo kalena gobollada dalka iyo gobolka Banaadir ay isku xiri doonaan, “Waxaan dooneynaa in aan isku furno waddooyinka isku xira Baydhabo iyo Muqdisho, Kismaayo iyo Muqdisho iyo Beledweyne iyo Muqdisho, mana ahan mid aan qarineyno”ayuu yiri Jen. Dhego-badan oo u warramayay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da.
Axad, October 21, 2012(HOL): Safiirka Soomaaliya ee Rwanda Ambassador C/llaahi Shiikh Maxamed ayaa warqadaha aqoonsiga danjirenimo u gudbiyay Madaxweynaha dalkaas Mr. Paul Kagame, iyadoo maamuus aad u heer sarreeyana loogu sameeyay madaxtooyada Kigali ee Rwanda. Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya oo holwgallo dad lagu soo qabqabtay Muqdisho ka fuliyay 10/21/2012 7:06 AM EST